Esona sipho esityebileyo "silahlekelwa" kwindawo yokubumba. Njengoko ucinga ngenyameko iinkcukacha zengubo ye-wardrobe, kufuneka ibe yintlanzi kunye neyokuqala.
Nasiphi na isipho kwibhokisi, umzekelo, umyili
Ifilimu yensimbi, iphepha eli-1, i-100x140 cm (i-ruble 40 / iphepha)
I-tape yokupakisha ngobubanzi obu-2 cm, 3.5 m (i-ruble 10 / m)
Iindleko ezipheleleyo zephakheji zi-ruble ezingama-75.
Itheyipu yokupakisha emibini emacaleni, ukuchithwa kwesikrini.
1. Beka ibhokisi phakathi kwiphepha lefilimu - ubuso phantsi. Yilayile ukuze umgca wefilimu uphawule ukuphela kwebhokisi enomgama we-1.5 cm. Khusela lo mgca ngepande yocingo, uyifake kwibhokisi. Gquba ibhokisi ngefilimu uze unqunyulwe ngaphezu kwelokuba umda ogqityiweyo uphawula umgca onamathele nge-1.5-2 cm. Yilungise ngeengcezu ze-scotch tape.
2. Sika ifilimu kumacandelo amabini asele, ushiye izibonelelo-2/3 zokuphakama kwamacala. Gquba iingqungquthela njenge "butterfly briquette" eqala kumgca ophezulu. Emva koko gquba amacala. Nciphise umgca ongaphantsi ngaphambi kokuba ugqoke.
3. Vula isithsaba uze ubophe kunye neziqwenga ezimbini zokupakisha tape criss-crosswise. Tape iteksi ukusuka phezulu. Isaphetha siya kubakho phakathi.
4. Yenza ibhola yomnsalo, ulungele ngokukhawuleza ngekristhi nge-11 yokujika kwetheyipu. Yibhoxe ngesiqingatha kwaye usike iingqungquthela kwi-semicircle.
5. Faka idibhoni encinci kwi-bend uye ubophe iqhosha elimisiweyo.
6. Hlanganisa phakathi kwe "petals" kwaye kabini ujika nganye kwisiseko se-clock-clock, ngokukhawuleza uyibhuqe, ngesandla sakho sokunene sibambe kwisiseko. Gcoba isaphetha esiphumela kwi-intersection yamateyipu ene-double tape tape.
> Kwiqela lendoda, unokunikezela ngokupakishwa kwindlela yokudlala "yehobile". Gquba ihembe ngephepha eliluhlaza kwaye ulibeke ebhokisini lobukhulu obufanelekileyo. Ukuhlobisa ibhodi yebhokisi kunye nomgca we-18-20 cm ububanzi. Sika amanqatha amathathu alingana nobubanzi bhokisi, udibanise izibonelelo ukwenzela ukuba zikwazi ukugujwa phantsi kwesiqhekeza. Kwakhona ukulinganisa ezintathu - kunye nobude bhokisi. Gquba umgca wexesha elide leemigqomo ngaphakathi kwaye uzilungiselele nge-tape yokubamba. Gquba isimbozo ngeentambo ezintathu ezingezantsi. Ukuze wenze oku, mbeke "ubuso" phantsi phakathi komnye wabo kwaye uyijikeleze ngesiqhekeza, ulahle iziphelo zombini ngaphakathi. Gcwalisa umgca womgca uze ukhuseleke isiqhekeza ngaphakathi kwengubo kunye nomtya wokubambelela. Eminye imichilo emibini ifakwe kwisigqubuthelo ngendlela efanayo. Yiya kwimivalo ecacileyo: qalisa ukulungisa phakathi, ngoko-ke. Yenza isembozo sezinto ezintathu zokuhlobisa imivimbo. Xhuma umgca we-intersection yabo. Ukusebenzisa ibhobho yeglue, gcoba iikristal ezinkulu kwi-intersection, ukuvala iindawo zokuncedisa.
> Xa uqala ukubopha nayiphi na ibhokisi, yibeke ukuze phezulu uhlale ngakwesobunxele. Emva koko kwifom ebonakalayo, isipho asiyi kujika.
> Khumbula ukuba kwibhokisi engxandekileyo isaphetha kufuneka sifakwe kwikhoneni elingasentla elingasese - njengesiko eYurophu. Ikona eliphezulu eliphezulu lihlotshiswe kuphela eMpuma.
> Paka izipho ezimbalwa ngephepha elifanayo.
Indlela yokufunda ukwenza isigqibo esifanelekileyo kwaye wenze isigqibo
Indlela yokupakisha isipho kwiphepha lesipho
Indlela yokucoceka kakuhle ikhompyutha yakho ngothuli
Ukukhetha abahlobo, imigaqo elishumi yokuphumelela
Impembelelo yamandla okucinga
Impembelelo yemozulu kwimpilo yabantu
Isaladi kunye nenkomo kunye neerdish
Isizathu se-osteochondrosis kunye nonyango lwayo
I-Solarium ebusweni-nokuba yinto enhle kuyo yonke unyaka
Manty nge pumpkin
Yintoni enokuyenza xa umntu omthandayo eshada nomnye
Umculi uJasmine uqala ubomi obutsha
IHoroscope yeentlanzi-abafazi ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Intombazana eyeka njani ukuba ngumhlobo wamadoda